Ndị na -emepụta ngwaahịa & ndị na -ebubata ngwaahịa - China Products Factory
Ihe ngosi slide
Ihe ngosi slide Undermount
Ihe mmịfe mkpuchi ntụ ntụ
Ọnụ ụzọ ụlọ kabinet
Ogbe adabere & Ngwa
Mgbapụta Micro Gear
Ihe ngosi na ndị ahịa
Ogbako ulo oru anyi
A na -ere ngwaahịa anyị n'okpuru ụdị aha atọ ama ama: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ha bụ sistemụ drawer, slides zoro ezo, slides na -ebu bọọlụ, ihe ngosi tebụl, ihe mkpuchi zoro ezo, aka, ihe mkpuchi oven na ngwa akụrụngwa akụrụngwa ndị ọzọ, nke a na -eji na arịa ụlọ, kabinet, ngwa ụlọ wdg.
Ngwaahịa ndị egosipụtara
37-540mm Ugboro abụọ Way Full Ex ...
37-230 mm Mgbakwunye zuru oke na ...
35mm Single ndọtị 2-Fol ...
Igwe anaghị agba nchara 430 square ...
Ihe na -esi nri gas na -esi na oven ...
Mgbakwunye zuru oke Soft-Close Undermount Drawer Slide for Cabinets
Mgbakwunye zuru oke dị nro na-adịte aka nke ihe na-adọkpụ kabinet na-enweghị etiti-bọọdụ drọm 16mm na-ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide a na -anaghị ahụ anya na -eji kposara na -agbanwe agbanwe na plọg plastik na -edozi ihe ndozi osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR33A
Otu Mgbakwunye Dị Mfe Na -emechi Ihe Ntanetị Ihe Nwepụ Ihe Nweta ya na ihe mkpuchi na plọg
Otu Mgbakwunye Dị Mfe Na -emechi Ihe Ntanetị Ihe Nwepụ Ihe Nweta ya na skru na -agbanwe agbanwe na plọg na -ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide a na -anaghị ahụ anya na -eji kposara na -agbanwe agbanwe na plọg plastik na -edozi ihe ndozi osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR23A
Mgbatị zuru ezu n'akụkụ etinyere nro na-emechi Waya-nkata Slide
Mgbatị zuru ezu n'akụkụ etinyere nro na-emechi Wire-basket Slide na-ejikarị maka kichin & kabinet ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide nkata waya a na -eji kposara idozi drawer nkata ahụ. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR33S
Silent soft nso undermount zoro ezo drọwa slide zuru ndọtị na n'ihu mkpachị
Silent soft nso undermount zoro ezo drawer slide zuru ezu na obere mkpachị na -ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide na -adịkarị ala na -eji braket n'ihu iji dozie ihe ndozi osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR33B
Otu Mgbakwunye Dị Mfe na -emechi slide na -ejikọ ya na njikọta n'ihu
Otu Mgbakwunye Dị Mfe Na -emechi Ihe Ntanetị Ihe Nrụgide Ihe Ntanetị ya na Njikọ Njikọ na -ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide na -adịkarị ala na -eji braket n'ihu iji dozie ihe ndozi osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR23B
Mgbatị zuru oke Synchronous na -agagharị mmechi nro na -agba ọsọ zoro ezo na brackets 3D n'ihu
Mgbakwunye zuru oke na -emegharị nwayọ nwayọ na -emechi nro na -agba ọsọ zoro ezo nwere brackets n'ihu 3D na -ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị ihe mmịfe drawer dị n'okpuru na -eji ihe nkedo ihu na -edozi ihe na -adọkpụ osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: Ahịa
Parts Omenala Omenala Epeepe Omenala China na-ere ọkụ
Okwu mmalite: Otu ntị gas na -esi nri igwe na -agbachi ọnụ ụzọ aka ekpe na n'akụkụ aka nri bụ otu ụzọ. Ngwa mgbakwunye maka ọnụ ụzọ oven osi ite gas. Akụrụngwa Geriss dabara maka ezinụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ọkụ eletrik, ọkachasị maka ụdị ọnụ ụzọ dị 3 KGS - 15 KSGS karịa afọ iri.
Nọmba nlereanya: YL-01
37mm ndọtị telescopic ọwa zuru ezu/okpukpu atọ bayonet Mount drawer slide
37mm Mgbatị telescopic zuru ezu/okpukpu atọ ọwa bayonet slide draịva mepụtara site na ahịrị nrụpụta dị elu yana ngwaahịa nnwale na-arụ ọrụ dị oke nwayọ ma dịkwa larịị. Banyere slide slide na -ebu bọọlụ nwere obosara dị iche iche maka 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Maka ogologo anyị nwere ike dabere na ihe ị chọrọ imepụta. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọwa telescopic anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nlereanya Mba.: YA-3703
37-230 mm igbe ndọtị igbe igbe kabinet na-ebu slide bayonet
37-230 mm igbe ndọtị igbe igbe kabinet na-ebu bayonet Mount drawer slide nke usoro nrụpụta dị elu na ngwaahịa nnwale na-arụ ọrụ dị oke nwayọ ma dịkwa larịị. Banyere slide slide na -ebu bọọlụ nwere obosara dị iche iche maka 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Maka ogologo anyị nwere ike dabere na ihe ị chọrọ imepụta. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọwa telescopic anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nlereanya Mba.: YA-37HK-230
37-540mm Mgbakwunye Ugboro abụọ Bayonet Mount Ball na-ebu Ngwa Igbe Igbe Slide
37-540mm Ugboro abụọ ụzọ mgbatị bayonet ugwu bọọlụ nwere ihe ngosi drawer igbe mepụtara site na ahịrị nrụpụta dị elu yana ngwaahịa nnwale na-arụ ọrụ dị oke nwayọ ma dịkwa larịị. Banyere slide slide na -ebu bọọlụ nwere obosara dị iche iche maka 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Maka ogologo anyị nwere ike dabere na ihe ị chọrọ imepụta. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọwa telescopic anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nlereanya Mba.: YA-37HK-540
Mgbatị zuru oke gbadara PUSH iji mepee slides drawer na ngwaọrụ mkpọchi
Mgbatị zuru oke na ala PUSH KA MARA slides drawer na ngwaọrụ mkpọchi na -ejikarị maka kichin & kabinet. Ụdị slide na -adịkarị ala na -eji ihe mkpọchi mkpọchi na drawer osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR33D
Mgbatị ndọtị zuru ezu iji mepee n'okpuru slides drawer nwere atụdo a na -agbanwe agbanwe
Mgbatị mgbatị zuru oke imeghe n'okpuru ihe ngosi slide drọwa ya na ntụtụ na -agbanwe agbanwe na -ejikarị maka kichin & ụlọ ịsa ahụ. Ụdị slide a na -anaghị ahụ anya na -eji kposara na -agbanwe agbanwe na plọg plastik na -edozi ihe ndozi osisi. Inwe igwe TAIWAI nwere nkenke, yana echiche dị elu, ndị otu teknụzụ anyị mara mma jiri nlezianya rụpụta akụrụngwa GERISS mara mma na nke kachasị mma nke bụ ụlọ ọrụ arịa ụlọ zuru ụwa ọnụ.
Nlereanya Mba.: EUR33C
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /12
Gbado anya na mmepe na imepụta ngwa akụrụngwa akụrụngwa
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ anyị email gị ma anyị ga -akpọtụrụ n'ime awa 24.
Jụọ ajụjụ ugbu a
Adreesị ụlọ ọrụ: Ụlọ 205, ụlọ B, 5589 Hutai Road, Baoshan District, Shanghai, China.
Adreesị ụlọ ọrụ: No.10 Yonghe Road, mpaghara ụlọ ọrụ Renhai, Leliu Town, Foshan City, China.
Copyright - 2010-2020: Edebere ikikere nile.